Hiriirri mormii guddaan guutuu Oromiyaa keessatti Sanbata dhufu geggeeffamuuf - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Hiriirri mormii guddaan guutuu Oromiyaa keessatti Sanbata dhufu geggeeffamuuf
Hiriirri mormii guddaan guutuu Oromiyaa keessatti Sanbata dhufu geggeeffamuuf
Join March for Freedom and Justice! Hagayya 6, 2016
Sanbata dhufu, Hagayya 6, 2016, guutuu Oromiyaa keessatti hiriirri mormii guddaan waamamee jira. Hiriirri nagaa kuni guddaa fi seena-qabeessa ta’a jedhameeti kan tilmaamamu. Hiriira kana irratti, Oromoon daangaa daangatti socho’ee, inni magaalaa fi baadiyaa, akkasumas xiqqaa-guddaan daanditti bayee sagalee mormii isaa ni dhageessisa jedhamee eegama.
Hiriira kana akka hin milkoofne godhuuf mootummaan Woyyaanee danqaa addaddaa uumuu nimala. Ta’us Oromoon doorsisaa fi sodaachisaa Woyyaanee irra aanee daanditti bayuudhaan mirga isaaf dubbatuu, akkasumas haqa isaa falmachuudhaaf yoomuu caalatti qophii ta’uu isaati kan mallattooleen addaddaa agarsiisustti jiran. Yeroon kuni yeroo Oromon yeroo kamuu caalatti mirga isaaf gootummaan Woyyaanee afoo itti dhaabataa jiruudha. Gootummaa fi murannoon kuni sanbata dhufus ifatti mul’atadha, abdii qopheessistoota hiriira kanaa.
Jiraattonni magaalaa garagaraa hiriira Sanbataa kanaaf qophii eegaluu isaaniiti kan amddiileen odeeffannoo addaddaa mul’isutti jiran. Hirrii kuni Finfinnee fi Dirree Dawaattis kan geggeeffamu ta’uun hubatameera.
Hiriira nagaa bayuun mirga ummataati. Hayyamni mootummaa irraa eegamu tokkos hin jiraatu, akka heera Itoophiyaatti.
Amaaraa fi saboonni biraa heddu qawwee hin hiikkanne. Sanbata dabre Goondaritti ummanni hiriira nagaa yoo geggeessu tokko itti hin dubbanne. Oromoon wanti ukkaamfamuuf tokko hin jiraatu.
Hiriirri kuni ajjeechaan hatattamaan akka dhaabatu, kan hidhame hundi akka hiikamuu fi naannoo Oromiyaa bulchiinsa woraanaa jalaa akka baatu gaafachuu irratti kan xiyyeeffatu ta’uu isaati kan hubatame.
Previous articleHiriirri bilisummaa babal’ataa fi hiddaan lafa qabataa deemaa jira
Next articleFinfinnee mootummaan abbaa-irree itti taphatu geetteerti yeroon Oromoon harka isaatti galfatu